कसरी आफ्नो पति या पत्नीलाई नियन्त्रणमा राख्ने? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सम्बन्ध
कसरी आफ्नो पति या पत्नीलाई नियन्त्रणमा राख्ने?
टेक्नोलोजी विजय बिक्री उगादी र गुढी पाडवा बिक्री: ल्यापटपमा छुट प्रस्ताव
खेलकुद आईपीएल २०२१, आरआर बनाम पीबीकेएस: केएल राहुल भन्छन कि बहिष्कार गर्ने खेलाडीले खेललाई गहिरो पारे, तर उनले विश्वास गर्न छाडेन।
चलचित्रहरू बिग बॉस कन्नड April अप्रिल १२ हाइलाइटहरू: अरविन्द केपीले दिव्य उरुदुगाको रिंग चन्द्रचुदलाई भावनात्मक बनायो
समाचार उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडूले समाजमा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न आह्वान गरे
वित्त टीसीएस क्यू Net शुद्ध लाभ १ 15% ले 9, २ 96 करोड भारु: १ Rs रुपैयाँको लाभांश घोषित
अटोमोबाईलहरू नेक्स्ट-जनरल स्कोडा ओक्टाभिया टेक्ने परीक्षण बिना क्याम्फ्लाज: भारतमा छिट्टै सुरुवात गर्दै
शिक्षा महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा २०२१ एचएससी र एसएससीका लागि स्थगित गरियो: मन्त्री वर्षा गायकवाड
घर सम्बन्ध विवाह र बाहिर विवाह र परे Oi-Anwesha द्वारा अन्वेषा बरारी डिसेम्बर,, २०११ मा
आफ्नो जोडीलाई नियन्त्रण गर्न सधैं एक नकारात्मक कुरा हुँदैन। यदि यो हो वा तपाईंको विवाह र परिवारको सुधार छ भने सबै तरिकाले यो गर्नुहोस्। जब दुई व्यक्ति विवाह गर्छन् र सँगै बस्छन् धेरै अप्रत्याशित मुद्दाहरू आउँदछन्। यी मुद्दाहरू केवल एउटा तरिकामा समाधान गर्न सकिन्छ, एउटा नियम र अर्कोले दिन्छ। प्रत्येक सम्बन्धमा सधैं एक प्रभावशाली पार्टनर हुन्छ जुन डराउँदैन, कुनै जोडी शक्ति गतिशीलताको नियमहरूमा अपवाद हुँदैन। त्यसोभए यदि तपाईले आफ्नो विवाहलाई अझ राम्रो तरीकाले नियन्त्रण गर्न सक्नु हुन्छ भने, नियन्त्रण मान्नुहोस् र यदि तपाई आफैंलाई नियन्त्रण गर्न दिनुहुन्न।
यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो जीवनसाथीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र यो कुनै अप्रिय अवस्था हुनेछैन।
तपाईंको जीवनसाथीलाई नियन्त्रण गर्न सुझावहरू:
पहिलो रात बिरालो काट्नुहोस्: तपाईंले यो भनाइ सुनेको हुनुपर्छ। मिथक यो छ कि एक पटक एक राजा एक बेवकूफ स्वभावको राजकुमारी विवाह। नयाँ रानीको एक अत्यन्त चिढचिलो बिरालो थियो जसले राजालाई उनको पहिलो रात पिटे। राजाले बिरालोको कत्ल गरे र शान्तसँग भने, 'मलाई बिरालो मनपर्दैन'। तपाईको विवाहको शुरुवात नै तपाईको जीवनसाथीलाई स्पष्ट पार्नुहोस् कि तपाईले शटहरू बोलाउनुहुनेछ। यदि तपाईंले उसलाई एकपटक लिप्त गर्नुभयो भने तपाईंले सधैं लज्जित पार्नुपर्नेछ।
केहि नियम बनाउनुहोस्: तपाईको पति वा पत्नी नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ जब तपाईंसँग नियमहरूको सेट हुन्छ। यदि चीजहरू विवाहमा नियन्त्रण बाहिर गइरहेका छन् भने नियमहरू राख्नु पर्ने तपाईं नै हुनुहुन्छ। 'तपाईं 8 सम्म डिनरको लागि फर्कनु पर्छ'। तपाईं अनाज्ञाकारीताको परिणामहरू विना तिर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई शिष्टतापूर्वक तर दृढतापूर्वक राख्नुहोस् र तपाईं गम्भीरताका साथ लिनुहुनेछ।
तपाईंको आफ्नै नियमहरू पालना गर्नुहोस्: यदि तपाईको जीवनसाथी लाई नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले बनाउनु भएको नियमहरु पालना गर्नु पर्छ। तपाईं पनि at बजेको खानाको लागि अप गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं यी नियमहरूको पालना गर्नुहुन्छ भने मात्र ऊ वा उसले तपाईंको आदेशलाई आदर गर्दछ।
रिसमा शान्त रहनुहोस्: तपाईंले असन्तुष्टि शान्तपूर्वक व्यक्त गर्न सिक्नुपर्दछ। यदि तपाईंले आफूलाई रीसमा छोड्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई आज्ञाकारितामा पहिलो पटक चकित पार्न सक्नुहुनेछ। अन्तत: तिनीहरू तपाईंको रिसको झुकावको लागि ब्यस्त हुनेछन् र यो उडाउनको लागि कुर्नुहोस्।
हेरफेर तर हल्का रूपमा: विशेष गरी तपाईंको श्रीमान्लाई नियन्त्रणमा राख्न अगाडि गर्न सकिदैन। यदि उसको अहम्लाई चोट पुग्छ भने उसले तपाईंको कुरा सुन्ने छैन यदि तपाईं सहि हुनुहुन्छ भने पनि। केही विलक्षण तरिकाहरू सिक्नुहोस्। यदि तपाईं उसलाई आफ्ना साथीहरूसँग बाहिर जान चाहानु हुन्न भने चिच्याउनु हुँदैन, केवल आँसुले भरिएको उदासी अनुहार तान्नुहोस् र ऊ बटर जत्तिकै पग्लनेछ।
एक पटक एक चोटिमा लगाम कस्नुहोस्: जब चीजहरू विवाहमा साँच्चिकै नियन्त्रण बाहिर गइरहेका हुन्छन् भने केहि झटका उपचार गर्नुहोस्। तपाईंको जोडीलाई कडा तरिकाले भन्नुहोस् कि यदि उनीहरूले उनीहरूका तरिका सुधार गर्दैनन् भने तपाईंले 'अन्य विकल्प' खोज्नुपर्नेछ। यो जादू जस्तै काम गर्दछ तर मात्र तपाईं यसलाई उचित प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको जीवनसाथीलाई नियन्त्रण गर्न यी सम्बन्ध सल्लाहहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
कसरी खाली पेट लसुन खानु
किन मैदा स्वास्थ्य को लागी खराब छ
महालय २०१ 2019
अजय देवगन प्यारा तो होना थाई
जन्म मिति द्वारा विवाह कुंडली प्रेम
कसरी अनुहारमा सेतो प्याचबाट छुटकारा पाउने